Iwu nzuzo - Etourism
Etourism co., Ltd ('Etourism', 'Etour''we', 'anyị', 'anyị') bụ mkpebi siri ike ichebe na ịkwanyere nzuzo nzuzo nke onwe gị na ịgbaso ụkpụrụ nchedo data na ndokwa n'okpuru Personal Data (Nzuzo) Iwu (ihe 'iwu').
Anyị nwere ike ịnakọta, hazie, jiri ma gosipụta ozi gị mgbe ị na-eji weebụsaịtị a (Weebụsaịtị a) yana ọrụ ndị Etourism nyere site na Weebụsaịtị a ('Ọrụ'). '' 'Na' nke gị 'mgbe ejiri ya na Iwu Nzuzo a gụnyere mmadụ ọ bụla na-abanye na saịtị a ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ.
Amụma nzuzo a na - ewepụta ntọala na usoro nke Etourism na - anakọta, usoro, ojiji na / ma ọ bụ gosipụta ozi gị enwetara n’aka gị mgbe ị na - abanye weebụsaịtị a ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ. Ozi ndị a nwere ike ịgụnye ozi nkeonwe metụtara ma ọ bụ jikọtara ya na otu onye dị ka aha, adresị obibi, nọmba ekwentị na adreesị ozi-e ('Ozi Nkeonwe').
Biko, jiri nlezianya gụọ Iwu Nzuzo a. Site na ịga na Weebụsaịtị a, ị na-ekwenye na nnakọta, nhazi, ojiji na mkpughe nke Ozi Nkeonwe gị dị ka akọpụtara na Iwu Nzuzo a.
Usoro nke Usoro
Etourism nwere ikike imelite, gbanwee ma ọ bụ gbanwee okwu nke Iwu Nzuzo a ma ọ bụ akụkụ ọ bụla na-enweghị ọkwa tupu, na ịga n’ihu webụsaịtị a ma ọ bụ ojiji nke Ọrụ ahụ na-egosi nnabata nke mmelite emelitere, mmegharị ma ọ bụ gbanwee. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na usoro na ọnọdụ niile dị na Nzuzo Nzuzo a na / ma ọ bụ mmelite ọ bụla, mmegharị ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ na-esote ya, ị ga-akwụsị ịnweta ma ọ bụ na-eji weebụsaịtị a na Ọrụ ahụ.
N'ihi ya, biko gaa na ibe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ma lee ụdị nke Amụma Nzuzo a dị ugbu a.
Anyị nwere ike ịnakọta Ozi gbasara gị nke ị nyere anyị ka ị na-eji weebụsaịtị a na ozi gbasara otu i si eji Weebụsaịtị a gụnyere mgbe ị mepere akaụntụ onye ọrụ gị ('Akaụntụ Onye ọrụ'), gaa na Weebụsaịtị a ma ọ bụ debe akwụkwọ maka Ọrụ ezubere iche ma ọ bụ iji ọrụ ahụ.
1) Imepe Akaụntụ Gị
Mgbe i mepere anyị Akaụntụ Onye ọrụ ma ọ bụ mezigharị ozi ọ bụla nke Akaụntụ Onye ọrụ gị, anyị nwere ike ịnakọta Ozi Nkeonwe gị, dị ka aha, adresị email, aha njirimara, paswọọdụ na akara ekwentị.
2) Ime ndoputa maka oru ma obu iji oru aka.
(a) Mgbe ị gara na Weebụsaịtị a, chekwaa ọrụ maka Ọrụ ebumnuche ọ bụla ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ, anyị nwere ike ịnakọta ma hazie ụfọdụ ozi (nke nwere ike ịnwe Ozi Nkeonwe gị ma ọ bụ nwee ozi njirimara na-abụghị nke gị mana agbanyeghị na Ozi Nkeonwe gị) gụnyere mana ejedebeghị na ndị edepụtara n'okpuru: Akwụkwọ ikike nke nzitere (ma ọ bụ site na ozi-e, ozigbo ma ọ bụ ozi nkeonwe ma ọ bụ nke ọzọ) n’etiti anyị na anyị.
(b) Nkọwa nke otu saịtị a (gụnyere data okporo ụzọ, data ọnọdụ na ogologo oge ndị ọrụ).
(c) Nzaghachi na nzaghachi na nyocha ndị Etourism mere metụtara Ọrụ nwere ike bipụta, kesaa ma ọ bụ kesaa.
(d) Ozi anakọtara ma chekwaa na sava anyị na ntanetị site na iji ma ọ bụ banye na Weebụsaịtị a (gụnyere aha ndekọ na paswọọdụ maka Akaụntụ Onye ọrụ gị, adreesị Protocol Intanet kọmputa gị (IP), ụdị ihe nchọgharị, ozi ihe nchọgharị, peeji ndị gara. saịtị gara aga ma ọ bụ nke na-esote gara).
Nchekwa nke Ozi
Ozi nkeonwe na data ndị ọzọ anyị natara n’aka gị, enwere ike ibufe gị, hazie ya, ma chekwaa ya na sava anyị.
Etourism ga-eji mgbali kwesịrị ekwesị iji nọgide na-enwe ahụ, elektrọnik na nhazi nhazi kwesịrị ekwesị iji hụ na ịjụtara ozi nkeonwe na data ndị ọzọ ọfụma na usoro Iwu Nzuzo a, yana iji kpuchido ụdịrị data ahụ na nnweta na-enweghị ikike ma ọ bụ mgbanwe na-enweghị ikike, ikpughere ma ọ bụ mbibi nke data.
Ozugbo anyị nwetara ozi gị, anyị ga-eji usoro siri ike na njirimara nchekwa iji nwaa ịbanye n'enweghị ikike. Etourism enyeghi ihe ngosi, nkwa ma obu ime ihe omuma nke I nyere anyi gha eche nche n’oge niile, rue n’onodu Etourism mezuru oru ya n’agbanyeghi ọnọdụ nke Etourism aghaghi idi na mmebi, mmebi, mmefu na mmefu obula. nke ị nwere ike ịta ahụhụ ma ọ bụ bute na nnweta na-enweghị ikike iji ma ọ bụ iji Ozi Nkeonwe gị.
Azụmaahịa ịkwụ ụgwọ niile emere ndị ọrụ nke atọ anyị họpụtara maka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ (PayPal) ga-eji teknụzụ zoro ezo n'ịntanetị. You na-ahụ maka idobe okwuntughe ị họọrọ na ịghara ịkọrọ ndị ọzọ paswọọdụ gị.
Ojiji nke Ozi
Etourism agaghị ere ma ọ bụ gbazite ozi gbasara gị na ndị ọzọ.
Etourism ga-eji Ozi Nkeonwe yana data ndị ọzọ anakọtara site na Weebụsaịtị a ma ọ bụ mgbe ị na-azụta ihe maka Ọrụ iji mepụta Akaụntụ Onye ọrụ gị, iji nye gị Ọrụ ahụ, imeziwanye weebụsaịtị a na Ọrụ gị, yana ịkpọtụrụ gị n'ihe metụtara Ọrụ ahụ. .
Ebumnuche nke iji Ozi Nkeonwe gị ma ọ bụ data ndị ọzọ dị otú a bụ iji nweta arịrịọ ịzụta ngwa ngwa, nkwado ndị ahịa ka mma na ọkwa oge maka Ọrụ ọhụrụ na onyinye pụrụ iche.
Nkpughepu nke Ozi
Anyị nwere ike site na oge ruo n'oge na-ekerịta ma na-egosipụta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ na ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnọ na mpụga obodo gị. Ọnọdụ ebe nkesa na ngosi dị otú a ga-eme nwere ike ịgụnye enweghị mmachi, ndị a:
1) Iji mezue ndoputa gi nke oma ma obu imeju Usoro Ojiji anyi.
2) Ọ bụrụ na are bụ onye ọbịa, gị na onye ọrụ gị dị mkpa metụtara Ọrụ ị mebere ndozi maka ma ọ bụ na-ezube idobe ya.
3) Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ, onye ọbịa ọ bụla n’ihe metụtara Ọrụ ị na-enye.
4) Nye ndị na-eweta ọrụ anyị nke atọ (gụnyere Google Analytics) nke anyị na-arụ maka arụmọrụ nke ọrụ ụfọdụ na nnọchite anyị, dị ka ọrụ nnabata weebụ, nyocha data, ahịa, nyocha ahịa, na iji nye gị ọrụ ndị ahịa.
5) Ọ bụrụ ma ruo n'ókè iwu achọrọ, iwu nke ụlọ ikpe ma ọ bụ ikike nke gọọmentị ọ bụla chọrọ ka ekwuputa ụdị ihe a.
6) Nye ndị ndụmọdụ anyị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ nwere nsogbu iji chebe ikike na ihe nke Etourism.
7) N'aka ndi ozo, nye ndi ozo nke ato site na nkwenye ederede gi.
Enwere ike inwe njikọ dị na Weebụsaịtị a nke nwere ike ibute gị ịhapụ Weebụsaịtị a yana / ma ọ bụ kpọga gị na websaịtị ndị ọzọ. Ikwesiri iburu n’uche na ozi o bula nke I nyere webusaiti ndi ozo a adabaghi ​​na iwu Nzuzo a, na Etourism abughi nke mmebi, mmebi, mmefu ma obu mmefu gi nwere ike ibute ma obu bute n’inye gi ma obu n’eme ihe gi. Ozi nkeonwe dị ma ọ bụ data ndị ọzọ dị na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Nweta data na Mmezi
May nwere ike ịnweta ma dozie Ozi Nkeonwe gị site na weebụsaịtị a ma ọ bụ mee data gị ma ọ bụ arịrịọ mmezi site na izipu arịrịọ gị site na email na management@koreaetour.com. Mgbe ị na-eji data nnweta ma ọ bụ arịrịọ mgbazi, anyị nwere ikike inyocha njirimara nke onye na-arịọ arịrịọ iji jide n'aka na ọ bụ onye ahụ nwere ikike ịnweta nnweta data ma ọ bụ mgbazi arịrịọ. A na-ejigide akwụkwọ ndekọ data dị ka achọrọ n'okpuru Iwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Iwu Nzuzo a, biko kpọtụrụ anyị site na email na management@koreaetour.com.
Emelitere ikpeazụ na June 13th, 2018
Usoro E-Commerce Usoro iji
Isi nke 1. Okwu Izugbe
Nkeji edemede 1. Ebumnuche
Ebumnuche nke usoro ndị a na ọnọdụ nke Etourism co., Ltd Ego Ego Elektrik bụ ịtọ mmekọrịta n'etiti Companylọ ọrụ na Ndị Ọrụ gbasara Ego Ego Elektrik, dabere na iji onye ọrụ Paypal nyere site na ntanetị ntanetị (https: // koreaetour. com / nke dị n'okpuru ebe a 'Weebụsaịtị' nke Etourism co na-arụ ọrụ, ltd (“Companylọ ọrụ”).
Nkeji edemede 2. Nkọwa
Usoro ndị a ejiri na usoro na ọnọdụ a ga-enwe nkọwa ndị a.
1. “Ego Azụma Eletrọnik” ma ọ bụ “EFT” ga-apụta azụmahịa ọ bụla ebe Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ ego elektrọniki site na ngwa elektrọnik, nke Ndị Ọrụ na-eji ya arụ ọrụ na-enweghị onwe ya ihu ma ọ bụ ndị ọrụ nke thelọ Ọrụ na-ekwurịta okwu.
2. “Azụmaahịa Paymentkwụ Eletrọnik” ma ọ bụ “EPT” pụtara azụmahịa ego elektrọnik ebe onye na-akwụ ụgwọ (“Payer”) na-enye ụlọ ọrụ ohere iji usoro ịkwụ ụgwọ elektrọnik ma nyefee onye na-anata ụgwọ ahụ (“Payee”) .
3. “Ngwaọrụ elektrọnik” pụtara ngwaọrụ eji na ozi elektrọnik na-ebu ma ọ bụ na-ahazi ozi azụmahịa elektrọnik, gụnyere na-enweghị mmachi, igwe na-akpaghị aka ego, igwe na-ere ngwa ahịa, ọdụ ịkwụ ụgwọ, kọmpụta, ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke na-ebugharị ma ọ bụ na-eme ihe ọmụma.
4. “Access Media” na-egosi pụtara ma ọ bụ ozi ejiri maka Ntụziaka Azụmaahịa na EFT ma ọ bụ na-ejide izizi na izi ezi nke nkọwa azụmaahịa, ma setịpụ na Nkeji 2 Nkebi 10 nke Iwu Nzuzo Eletriki, gụnyere kaadị elektrọn ma ọ bụ data elektrọn dabara adaba (gụnyere ozi kaadị akwụmụgwọ) ), akwụkwọ n'okpuru Usoro Mbinye aka dijitalụ, ọnụọgụ onye ọrụ edebanyere aha na ụlọ ọrụ ego ma ọ bụ azụmaahịa elektrọnik, ozi njirimara nke bio ma ọ bụ okwuntughe achọrọ maka iji ụdị ma ọ bụ ozi a.
5. “Nọmba onye ọrụ” pụtara nchikota nke ọnụọgụ na mkpụrụedemede nke ndenye ahọpụtara ma approvedlọ ọrụ ahụ kwadoro maka ebumnuche nke Onye ọrụ na iji Ọrụ ahụ.
6. “Paswọdu” pụtara nchikota nke ọnụọgụ na mkpụrụedemede nke Onye ọrụ họọrọ ma hụkwa ya maka ebumnuche mata Onye Ọrụ a ma chekwaa ozi onye ọrụ.
7. “Ntụziaka azụmahịa” pụtara Ntụziaka onye ọrụ nye ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrọniki iji hazie EFT na nkwekọrịta EFT.
8. “Njehie” pụtara ikpe ọ bụla ebe emeghị EFT dị na Ntuziaka Azụmaahịa Onye ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta ETF n'ejighi nzube ma ọ bụ omume nlebara anya nke Onye ọrụ.
9. Ọ gwụla ma akọwara ya na edemede a ma ọ bụ Usoro ndị ọzọ nke Usoro na Ọnọdụ a, iwu niile ga-achịkwa ya dịka Iwu Nchịkwa Ego Kọmputa.
Isiokwu 3. Ngosiputa na ndozigharị n’okwu na ọnọdụ
1. Companylọ ọrụ ahụ ga-edepụta Usoro a na ọnọdụ ahụ na ntanetị tupu Onye ọrụ emee EFT ka Onye ọrụ ya nwee ike ịlele akụkụ nke usoro iwu a.
2. Companylọ ọrụ ahụ, na arịrịọ Onye ọrụ ahụ, ga-ekesara (gụnyere nnyefe site na email) nnomi nke Usoro na Ọnọdụ Onye Nwe ya n'ụdị akwụkwọ elektrọn.
3. N'ọnọdụ ahụ Companylọ ọrụ ahụ mezigharị Usoro ndị a, thelọ ọrụ ahụ ga-agwa ndị ọrụ site na biputere usoro mmezi na ọnọdụ ndị a, na-erughi otu ọnwa tupu ụbọchị ahụ dị mma, na enyo ebe a na-abanye ozi azụmahịa na webụsaịtị weebụsaịtị. .
Isiokwu 4. Ikike nke ụlọ ọrụ
1. Companylọ ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ maka mmebi ma ọ bụ ọghọm ọ bụla nke Onye ọrụ na-esite na ihe ọghọm nke ụgha mebiri ma ọ bụ wayo nke Access Media (naanị ma ọ bụrụ na Companylọ ọrụ ahụ bụ onye na-eweta ya, onye ọrụ ma ọ bụ onye nchịkwa nke Access Media) ma ọ bụ na-ebugharị elektrọnik ma ọ bụ nhazi nke nkwekọrịta ma ọ bụ Ntụziaka azụmahịa.
2. Agbanyeghị na ngalaba nke mbu dị n'elu, Companylọ ọrụ ahụ agaghị enwe nsogbu maka mmebi ma ọ bụ mfu Onye ọrụ na nke ọ bụla n'ọnọdụ ndị a:
A. Mbibi ma ọ bụ mfu amịara Onye ọrụ ahụ n'ihi arụmọrụ ma ọ bụ ụgha nke Access Media nke ụlọ ọrụ na-esiteghị ya.
B. Onye ọrụ na-agbazinye, nyere ndị ọzọ ihe eji, ma ọ bụ nye ha maka ebumnuche mbufe ma ọ bụ nkwado dịka nchekwa, Access Media, ma ọ bụ gosipụta ma ọ bụ leghaara ya anya na Mgbasa Ozi ya n'agbanyeghị na ọ maara ma ọ bụ kwesịrị ịma nke ahụ. ndị ọzọ nwere ike ịme EFTs site na iji Media's Access Media na-enweghị ikike.
C. Na agbanyeghị na Ntụziaka Onye Isi Azụmaahịa Onye Ọrụ, Companylọ ọrụ ahụ agaghị enwe ọrụ maka igbu oge ọ bụla ma ọ bụ ọdịda hazie usoro EFT na ntanetị nke ihe mmachi dị ka ọghọm ọdachi, oke ojii, ọkụ, nnyonye anya netwọ ma ọ bụ ihe omume ndị ọzọ na-enweghị ike ịchịkwa nke Companylọ Ọrụ ahụ. ; ewepụta na Companylọ ọrụ ahụ gwara Onye ọrụ banyere ihe egbu oge a ma ọ bụ ọdịda ya (gụnyere ịgwa ndị ọrụ ya site na ụlọ ọrụ ego ma ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị na-ekesa akwụkwọ ntanetị)
3. Ọ bụrụ na Companylọ ọrụ ahụ kwụsịtụrụ ọrụ EFT nwa oge maka mmezi ma ọ bụ nnọchi nke ozi na ihe nkwukọrịta ma ọ bụ akụrụngwa, ọ ga-agwa ndị ọrụ maka oge nkwụsị dị otú a na ebumnuche ya tupu ị nweta weebụsaịtị.
Isiokwu 5. Mkpesa na nghọtahie
1. Onye ọrụ nwere ike ịrịọ mkpebi esemokwu dị ka nkwupụta mmebi, bulie echiche na mkpesa metụtara EFTs onye na-ahụ maka ya na onye njikwa esemokwu akọwapụtara na ala isi peeji nke weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ.
2. Na ihe omume Onye ọrụ etinyela maka disputelọ Ọrụ ahụ maka mkpebi nghasa dị otú a, thelọ ọrụ ahụ ga-agwa Onye ọrụ nsonaazụ nke nyocha ya ma ọ bụ mkpebi nke esemokwu ahụ n'ime ụbọchị iri na ise (15).
3. Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ jụrụ nsonaazụ esemokwu ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike ịrịọ maka esemokwu esemokwu na Kọmitii Mmekọrịta Ego nke Ọrụ Njikwa Ego n'okpuru Akụkụ 51 nke Iwu Ntọbe nke Commission Ọrụ Ọrụ ma ọ bụ Mkpebi Okwu Azụmaahịa. Commission nke Korea Consumer Agency n'okpuru Nkeji edemede 31 Paragraf nke 1 nke Iwu Mmekọrịta na ndị ahịa, n'ihe metụtara iji Ọrụ Tlọ ọrụ EFT
Isiokwu 6. (Ọrụ nke oflọ Ọrụ)
N'ịdị n’ihu iji hụ na nchekwa na ntụkwasị obi maka EFT, Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ E setịpụrụ Kọmitii Na-ahụ Maka Ego Ego na IT na azụmahịa ego eletriki dịka akụ mmadụ, akụrụngwa, Ngwaọrụ elektrọnik maka nnyefe elektrọnik ma ọ bụ nhazi.
Isiokwu 7. (Iwu ndị ọzọ karịa usoro na ọnọdụ)
Okwu ọ bụla akọwapụtaghị ebe a (gụnyere nkọwa nke okwu) ga-achịkwa iwu ndị metụtara nchedo ndị ahịa, dị ka Iwu Ego Ego Kọmputa, Iwu Maka Ncheta Ndị Ahịa na Azụmaahịa Elele, Ec., Iwu E-Azụmaahịa, na Ọrụ Azụmaahịa Ego Ego Pụrụ Iche Mee, na usoro na ọnọdụ dị iche.
Isiokwu 8. Ikike
A ga-enyefe esemokwu ọ bụla n'etiti thelọ ọrụ na ndị ọrụ na ikike ọdabara dabere na Iwu Usoro Civil.
Isi nke 2. PayPal
Isiokwu 9. Nkọwa
“PayPal” bụ ụlọ ọrụ azụmahịa kọmputa (e-commerce) nke na-eme ka ịkwụ ụgwọ dị n'etiti ndị ọzọ site na ịnyefe ego na ntanetị. PayPal na-enye ndị ahịa ohere ịmepụta akaụntụ na weebụsaịtị ya, nke ejikọtara ya na kaadị akwụmụgwọ onye ọrụ ma ọ bụ nyocha ego.
Isiokwu 10. Nche
1. Companylọ ọrụ ahụ na-eji PayPal enye ọkwa nchekwa kachasị elu maka ịkwụ ụgwọ arụ ọrụ site na weebụsaịtị a. PayPal na - echekwa nchedo onye ọrụ site na izo ya na njikọ mgbe ị na - ebunye ozi gbasara akụ na netwọọ, yana site na ichedo data ego nke onye ọrụ n'oge usoro ịkwụ ụgwọ na usoro ịkwụ ụgwọ.
2. Ọ bụrụ na ngalaba nchekwa na-enyo enyo na wayo, Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike ịkagbu azụmahịa ahụ maka ebumnuche nche. N'ọtụtụ oge, a ga-agwa ndị ọrụ banyere ikike ma ọ bụ okwu aghụghọ, tupu ndị ọrụ emechaa usoro nyocha.
3. Enwere ike ịkwụ ụgwọ site na weebụsaịtị weji kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit, ma ọ bụ PayPal. A na-eziga data kaadị akwụmụgwọ ndị ọrụ na PayPal ka nchekwa ya na ụlọ ọrụ ahụghị ya. Maka nkọwa nke nchekwa PayPal hụ www.paypal.com/security.
Isiokwu 11. Nkwụghachi
Companylọ ọrụ ahụ ga-akwụghachi dị ka usoro nkwụghachi ụgwọ PayPal dị nye ndị ọrụ kwekọrọ na nkwekọrịta kagbuo ụlọ ọrụ ahụ. Ego ahụ kwesịrị ịlaghachi na nkwụghachi ụgwọ nke onye ọrụ ma ọ bụ na kaadị akwụmụgwọ onye ọrụ. Oge ejide: Ọ bụrụ na ejiri “nkwụghachi onye ọrụ ọnọdụ ego,” ọ pụtara na akwụghachi azụmaahịa ahụ tupu o kpochapụ akụ nke onye ọrụ. Usoro a na-ewe 3 gaa ụbọchị ọrụ azụmahịa 5 iji mezue, a ga-atụgharị nkwụghachi na nguzozi onye ọrụ ozugbo ịmechara.
Isi nke 1. Bọchị dị irè)
Nkwekọrịta a ga-abanye na June 13, 2018.
Isi nke 2. Bọchị dị irè)